Apple wuxuu soo saaray seddex ogeysiis cusub oo ku saabsan AirPods | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu bilaabayaa seddex ogeysiis cusub oo AirPods ah
Ragga ka socda Cupertino waxay sii wadaan inay dhiirrigeliyaan qalabkii ugu dambeeyay ee ay ka bilaabeen suuqa. Munaasabaddan, waxay ahayd markii loo soo gaabiyo 'esparadísimos', oo soo bandhigeedu dib u dhacay dhowr bilood, AirPdos, kuwa sameecadaha dhagaha la 'wireless' oo ahaa wax lala yaabo, Ilaa iyo hada waxa kaliya ee lagu xamanayay waxay ahayd suurtagalnimada in Apple ay soo saarto maqal kumbuyuutar wireless ah, laakiin maanaan arag wax naqshad ah, ama muuqaalo iyo wax la mid ah. Kanaalka YouTube ee Apple ayaa mar kale helay saddex fiidiyow oo cusub oo cinwaan looga dhigay iPhone 7 + AirPods - Stroll, iPhone 7 + AirPdos - Siri iyo iPhone 7 + AirPods - Xusuusin. Apple waa inay ka faa'iideysataa ku dhawaaqista si ay u dhiirrigeliso labadii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay.
Dhamaan Xayeysiiska Waxay la socdaan heesta Down, ee Marian Hill. Midka ugu horeeya ayaynu arki karnaa sida isticmaaluhu isugu mashquuliyo heesta markuu dhigo AirPod-yada oo uu bilaabo inuu ku cayaaro dabaqa, darbiyada ... Xayeysiinta labaad waxaan arki karnaa sida halyeeyada xayeysiinta, oo la mid ah kii hore, wuxuu adeegsadaa xakamaynta Siri si uu uga codsado Apple Music inuu u ciyaaro heesta Marian Hill. Midka ugu dambeeya, sidoo kale soconaya 15 ilbidhiqsi sida kan labaad, waxaan arki karnaa sida dhibcaha heesta ay noo tusayso AirPods halkii ay ka ahaan lahayd calaamadaha muusikada, halka heesta ay ciyaarayso.
Bilowga sanadka ayaan kugu wargalinay adiga kordhinta wax soo saarka shirkadda Taiwan oo loo xilsaaray soo saarista AirPods, si loo waafajiyo baahida ballaaran ee hadda ku sii socota jiritaanka AirPods, dalab si weyn hoos loogu dhigi doono marka shirkaddu buuxiso dhammaan boos celinta hadda. Maalmo ka hor Tim Cook wuxuu sheegay in baahida loo qabo AirPods ay ka badneyd sidii la filaayay, ayna sameynayaan wax walba oo macquul ah si ay u awoodaan inay ku qancaan dhamaan amarrada ay hayaan sida ugu dhaqsaha badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple wuxuu bilaabayaa seddex ogeysiis cusub oo AirPods ah
Ku dhawaaqida cusub ee Apple Watch Series 2